Ankizy Mitady Vola | Vetsovetson'i Mamisoa |
Ankizy Mitady Vola
Nampidirin'i mammysou : 06:20
Anisan'ny fampanantenana goavana nataon'ny filoha ankehitriny, Hery Rajaonarimpianina ny fanatsarana ny sehatry ny fanabeazam-pirenena, saingy tsy hita taratra izany mandraka androany satria mbola marobe ireo ankizy tsy afaka mandia fianarana ka voatery mikarama amin'ny sehatra maro.
Ankizy miasa mitady vola amin'ny alalan'ny fanaovana tononkalo na hira ao anaty fiara fitateram-bahoaka no hoentina amintsika eto, mitety fiara iombonana izy ireo amin'izany ary etsy amin'ny Fasan'ny Karana, Anosipatrana no tena toerana misy azy ireo. Maromaro ireo ankizy manao ity asa hafakely ity saingy i Son kely no sendra nifanojo t@ko tamin'ity indray mitoraka ity raha nandeha fiara iombonana (bus 152) ny tenako.
Variana ny mpandeha izay sendra azy ireo voalohany, ary tsy misalasala manome izay foiny. Ireo efa zatra azy ireo kosa tsy taitra intsony satria voalaza fa tsy miova mihitsy ny tononkalo fiventson'izy ireo ary mitovitovy daholo. Lava ny tononkalo nataony, ary hita fa efa nianarana mialoha.
Tsy afaka nanadihady azy aho fa ny anarany ihany no hany afaka nanontaniako satria maika ery izy hiampita bus iray hafa indray mba hitady vola. Rehefa nanontany ilay mpanampin'ny saofera (resevera) aho dia nilaza izy fa mitovitovy tahaka izany daholo ny tononkalo sy ny hira ataon'ireo ankizy. Milaza momba ny zava-misy sy ny zavatra iainan'izy ireo. Ary tena mahazo vola izy ireo amin'izany.
Ity sarin'i Son Kely manao tononkalo, omena anao eto ambany ihany koa ny sombiny kely tamin'ny tononkalony:
Hafatra ho an'ny fivondrononana
Aza hoentina amin'ny fiavonavonana
Avelao ilay mpivarotra mba hitady
Tsy manan-karena fa mafy ady
Tsy menatra akory ilay ramose
Isan'andro isan'andro mitaky ticket
Ny paosy amin'izany mibotsina be
Hitan'ny olona hoe mi-zebra be
Tahiry indray no ankizy hoentina amintsika manaraka eto, mana-talenta kosa i Tahiry eo amin'ny sehatry ny fihiràna. Tsara feo tokoa izy hoy ireo mpandalo izay sendra maheno azy ka tsy misalasala manome vola izay foy ho azy. Mitady vola manerana an'iny Analakely iny no ataony isan'andro amin'ny alalan'ny fihiràna indrindra ny hiram-pivavahana.
Santionany tamin'ny hira sendra nandalovako teny Analakely ny hira "Andro fandalovana". Ankafizo ato anatin'ny lahatsary (ialàna tsiny fa mivadika ilay lahatsary :) ):
Ny ankizy miasa dia taratry ny fahantrana ka anisan'ny porofo mivaingana hanehoana ny fahantrana iainan'ny maro amin'ny Malagasy ny toe-javatra mampalahelo tahaka izao. Ankizy tokony mbola handeha hianatra nefa voatery na teren'ny ray aman-dreny hitady vola. Voazimbazimba ny zon'ny ankizy ary mila fiheverana.
Ao anatin'ny iray volan'ny ankizy ihany koa isika izao. Inona no azontsika atao amin'ireny ankizy sahirana ireny? Marobe ireo fikambanana mijoro tokony afaka manampy azy ireny. Ary indrindra ny fanjakana, izay tokony handray fepetra sy hametraka politika mahomby momba ny fiarovana sy ny fanatsarana ny tontolon'ny ankizy ary indrindra ny fanafoanana ny asan'ny ankizy tsy ampy taona.
Hevitra (0) | Verindrohy (trackback) (0) | Ankizy miasa